पहिलो पटक तीन लि,ङ्गका साथ जन्मियाे बच्चा, विज्ञानका लागि दियो चुनौती - Rising Dainik
April 8, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on पहिलो पटक तीन लि,ङ्गका साथ जन्मियाे बच्चा, विज्ञानका लागि दियो चुनौती
एजेन्सी इराकमा एउटा बच्चा तीनवटा लि’ङ्गका साथ जन्मिए । यो सामान्य मानिसको लागि मात्र नभएर चिकित्सा विज्ञान तथा विज्ञका लागिसमेत आश्चर्य बनाउने घ’टना बन्यो । यसको पछाडिको कारण विज्ञानलाई थाहा छैन । यस अवस्थालाई ‘सुपरन्युमरेरी पेनिस’ (Supernumerary penises ) भनिन्छ । अहिलेसम्म संसारभरमा एकसय द्वीलि ङ्गी अर्थात् डिफालिया (Diphallia ) को केस आएका छन् । तर, यो तीन लि ‘ङ्ग वाला केस भने पहिलो पटक सार्वजनिक भएको हो ।
यसलाई हालसम्म संसारकै पहिलो तथा दुर्लभ घ’टना मानिएको छ । यसअघि द्वीलिगी बच्चा जन्मिएका समाचार मात्रै आएका थिए । तर, यसको कारणको बारेमा भने अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेको छैन ।अहिलेको यो जन्मिएको त्रिलिङ्गी बच्चाले वैज्ञानिकका अगाडि ग ‘म्भिर तथा नयाँ चु नौ ती खडा गरिदिएका छन् ।
इराकको मोसुल शहर नजिकै दोहुकमा जन्मिएको यस बच्चाका दुइवटा लि’ ङ्ग श लय क्रि या गरी फालिएका छन् । विज्ञका अनुसार ६० लाख बच्चामध्ये एक बच्चा एकभन्दा बढी लि ‘ङ्गका साथ जन्मिन सक्छ । हालसम्म संसारभरी झण्डै एक सय द्वीलिङ्गी केस थाहा भएका छन् । इन्टरनेशनल जर्नल अफ सनका अनुसार यो एउटा अति दुर्लभ रोग हो जुन ३ देखि १५ साताको भ्रुणमा हुने गर्छ । यस्तो पहिलो केस १६०० को दशकमा भेटिएको बताइएको छ । यसमा स्क्रोटम वा एनस पनि एकभन्दा बढी हुनसक्छन् । कैयौं पटक लि ‘ङ्ग अविकसित पनि हुन सक्छन् । हालसम्म भेटिएका केसहरु एक आपसमा अलग देखिएका छन् । यसकारण यसलाई एक दुर्लभ अवस्था भएकोसमेत बताइन्छ ।
यो घ;टनाको पछाडिको कारण स्पष्ट नभए पनि न;शालु प;दार्थको सेवन यसको कारण हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक स’ङ्क्रमणका कारण पनि यस्तो हुनसक्छ । रिपोर्ट जेनेटिक संरचनामा हुने परिवर्तनका कारण पनि यस्तो हुनसक्ने बताइएको छ ।
यसका कारण बिरामीमा ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट, स्केलेटल वा पेल्भिक हड्डीदेखि हृदयघातको समस्याको सामना पनि गर्नुपर्ने सम्भावना छ । सामान्यतया, यी सबै अंगले सामान्य तरिकाले काम गर्ने गर्छन् । तर, यी इराकी बच्चामा भने यो अवस्था थिएन । यसकारण यसलाई सहजै शल्यक्रियाद्वारा का’टेर फा’लियो ।
सामुद्रीक शास्त्र अनुसार शरीरको यी अंग फर्फराउँदा हुन्छ यस्तो लाभ !
देशभरका प्रशासनलाई लागू हुनेगरि गृह मन्त्रालयले दियो यस्तो निर्देशन
October 17, 2020 Ramash Kunwar
पुन: लकडाउन हुन सक्छ! दशैँका लागि यातायात टिकट बुकिङ के हुन्छ ?